Mika Waltari naSinuhé muIjipita. Ongororo yebasa remunyori wechiFinnish. | Zvazvino Zvinyorwa
Iye munyori weFinland Mika Waltari Akafira muHelsinki munaAugust 26, 1979. Ndiye mumwe wevanyori vane mukurumbira pasi rese venyika ino. Iye anozivikanwa nenhoroondo yake yenhoroondo uye aive munyori ane mukurumbira. Zita rayo rinonyanya kuzivikanwa ndere Sinuhé, muIjipita. Nhasi mundangariro dzake, ndinorangarira basa rake.
2 Sinuhé muIjipita
2.1 Zvimedu zveruzivo
2.1.3 Mamwe snippets
3 Iyo bhaisikopo
Mika Toimi Waltari akaberekerwa mu Helsinki uye aive (uye nanhasi) mumwe wevanyori vane mukurumbira vekuFinland. Iye anozivikanwa pamusoro pezvose nekuda kwenhoroondo yake enhoroondo. Kudzidza Theology uye Philosophy uye akashanda semunyori wenhau uye mutsoropodzi wemapepanhau akasiyana siyana eFinland nemagazini. Yakanga iri zvakare nhengo yeFinnish Academy. Akanyora zvirinani 29 enganonyorwa, nhetembo nhatu kuunganidzwa uye makumi maviri nematanhatu mitambo pamwe neakawanda redhiyo uye mafirimu zvinyorwa, shanduro, uye mazana ekuongorora nezvinyorwa.
Runyorwa rwake rwakakurumbira nderwekuti Sinuhé, muIjipita, rakabudiswa muna 1945. Asi kwakanga kune mamwe akawanda akafanana Kuriton Sukupolvi, Akhamaton, Miguel, mupanduki, Ngirozi yakasviba, Kukombwa kweConstantinople, Mutambo une njodzi, Mambokadzi kwezuva, Mumwe mutorwa akauya kupurazi, Mambokadzi webhora ramambo, Kubva kuvabereki kuenda kuvana, Marcus muRoma, Carnac Zororo, Musikana anonzi Osmi. Mabasa ake akashandurwa mumitauro inopfuura makumi matatu.
Yakanga iri lkutanga uye kubudirira zvakanyanya yezvinyorwa zvekare zvemunyori uyu. Izvi yakagadzirirwa muIjipita Yekare, panguva yekutonga kwa pharao Akhenaten. Iye protagonist ndiye Sinuhé, chiremba wako wamambo, uyo anotaurira nyaya yake mu kutapwa mushure mekufa kweiyo pharao. Chii chimwe, yarasikirwa nenzvimbo yayo nekuda kwehukama hwake hwakakundikana ne courtesan. Uyezve kurasikirwa imba yevabereki vake nenhaka yake yose. Kunze kwezviitiko zvakaitika muEgypt, inoverengeka inorondedzerawo iyo famba kubva kuSinuhé na Babilonia, Krete nemamwe maguta.
Ini, Sinuhé, mwanakomana waSenmut nemukadzi wake Kipa, ndanyora bhuku iri. Kwete kuimba rumbidzo dzavamwari venyika yeKemi, nekuti ini ndaneta nevamwari. Kwete kurumbidza mafarao, nekuti ini ndaneta nezviito zvavo. Ini ndinonyora ndega. Kwete kubatira vanamwari, kwete kufadza madzimambo, kwete nekutya kuuya kana kubva mutariro. Nekuti mukati mehupenyu hwangu ndakatambura nemiedzo yakawanda pamwe nekurasikirwa zvekuti kutya kusina maturo hakugone kunditambudza uye ndaneta netariro yekusafa sezvandiri vamwari nemadzimambo. Izvo, saka, ndezvedu chete kune wandinonyora, uye pane ino pfungwa ndinotenda kuti ndinozvisiyanisa pachangu kubva kune vese vekare kana venguva vanyori.
Nekuti ini, Sinuhé, ndiri murume uye nekudaro ndakagara mune vese vakambovepo ini ndisati ndagara mune vese varipo mumashure mangu. Ndichagara mukuseka nekuchema kwevanhu, mukusuwa kwavo nekutya kwavo, mukunaka kwavo nekuipa kwavo, mukushaya simba kwavo nesimba ravo. Semurume, ndichagara nekusingaperi mumunhu uye nechikonzero ichi handidi zvinopihwa paguva rangu kana kusafa kwezita rangu. Izvi ndizvo zvakanyorwa naSinuhé, muIjipita, uyo aigara ega mazuva ese ehupenyu hwake.
Chokwadi ibanga rakapinza, chokwadi chironda chisingarapike, chokwadi iasidhi inoparadza. Neichi chikonzero, mukati memazuva ehudiki hwake nesimba rake, munhu anotiza kubva pachokwadi achienda kudzimba dzemafaro uye akapofumadzwa nebasa nekuita feverish, pamwe nekufamba nekutandara, nesimba uye nekuparadza. Asi zuva rinouya apo chokwadi chinomubaya sepfumo uye asingachanzwi mufaro wekufunga kana kushanda nemaoko ake, asi achizviwana ari ega, pakati pevamwe vake, uye vamwari havaunze zororo kune vake kusurukirwa.
Ini ndinonyora nekuti waini inovava mukanwa. Ini ndinonyora nekuti ndarasa chishuwo chekutandara nevakadzi, uye kana iro bindu kana dziva rehove zvinoita kuti maziso angu afare. Munguva inotonhora yehusiku hwehusiku, musikana mutema anodziisa mubhedha wangu, asi ini handimufarire. Ndarasa vaimbi, ruzha rwezviridzwa zvine tambo nenyere zvaparadza nzeve dzangu. Ichi ndicho chikonzero ini ndinonyora, Sinuhé, kuti ini handizive zvekuita nehupfumi kana makapu egoridhe, mura, ebony nenyanga dzenzou. Nekuti ini ndine zvese izvi zvinhu uye hapana chandatorerwa. Varanda vangu vachiri kutya tsvimbo yangu, uye varindi vanodzikisa misoro yavo uye vanoisa maoko avo pamabvi avo ini ndichipfuura. Asi nhanho dzangu dzave dzakaganhurirwa uye hapana kana ngarava inokwira munzvimbo yepasi.
De 1954, rakaiburitsa Darryl F. Zanuck ye20th Century Fox uye ndokuzvitungamira Michael Curtiz, director akakurumbira we Robin wematanda o Casablanca. Pakati pevadudziri vacho pane Edmund Purdom, Jean Simmons, Gene Tierney, Victor Mature, Michael Wilding, John Carradine kana Peter Ustinov. Iyo haina kuwana budiriro inotarisirwa, asi yakasarudzwa kuOscar yekugona kwazvo kutora mifananidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Mika Waltari naSinuhé muIjipita. Ongororo yebasa remunyori wechiFinnish.
Mabhuku akanakisa akaiswa muCaribbean